Fawdada Dawladnimo ee Puntland ka Jirta - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandFawdada Dawladnimo ee Puntland ka Jirta
December 5, 2020 marqaan Puntland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 0
Puntland oo soo jirtay dawladnimadeeda waqti dheer, ayaa hadana ah meel aan horumar badan laga sammeeyn dawladnimada. Madaxweeynuhu waa midka iska leh go’aan kasta, baarlamaankuna waa kuwo inta badan jeebka ugu jira madaxweeynayaasha hadba midkii yimaada.
Hadii guddoomiyaha baarlammaanka ama xubnaha baarlammaanka ay xooggaa shaqada daacadnimo u guttaan ama ay horumuud u noqdaad la xisaabtanka dawladda, waxaa madaxweeynaha uu ka keenayaa mooshin sida marar badan horey u soo dhacday. Hadaba wixii maalintii Khamiista ka dhacay baarlammaanka Puntland ee xilka looga qaadayey xubno ka mid ah baarlammaanka, waa mid ku tusineeysa sida ay fawdo u tahay hannaanka dawladnimo ee Puntland.
Xafiiska xeer illaalinta ayaa ku soo oogay ayaa la yiri xubnahaas baarlammaanka Aflagaado, hanjabaad, Ishortaag shaqo, ku xadgudub jireed iyo mid sharafeed. Waxaase dhab ah, in xubnahan baarlammaanka ay doonayeen oo kalliya in dawladda lagula xisaabtamo heshiiskii shirkadda DP World.
Hase ahaatee, madaxweeynaha iyo guddoomiyaha baarlammaanka oo ah kuwo aan dooneeyn in dawladda lagula xisaabtamo heshiiskii shrikadda DP World, ayaa ahaa kuwii soo malleegay in xubnahaas dacwad aan jirin lagu soo oogo si meesha looga saaro. Hadaba, dastuurka Puntland waxa uu sheegay sida xubbinimada baarlammaanka lagu lumin karo oo kalla ah:
B. In ay xubinta geeriyooto;
T. Xaalad xil gudasho la’aaneed oo joogto ah;
J. Xubinta oo istiqaalada iyada soo gudbisata, golahuna uu ka aqbalo;
X. Xubinta ay ka maqnaato labo kalfadhi oo caadi ah ee isku xiga sabab la’aan.
Sidoo kalle, sida aan warka ku helleeyno waxaa kalle oo jiray xubno kalle oo kulla jiray xubnahaan arrimahaa lagu soo eedeeyey oo aan lagu soo darin , waxaana ka mid ahaa xubno ka soo jeeda beelaha kalle, balse marka la qiimeeyey oo la arkay in Sunaami ay uga iman karto madaxweeynaha ayaa la go’aamiyey in laga reebo xubnahaas kuwii codka loo qaaday.
Si kastaba ha ahaato, Puntland waa meel ay ka jirto fawda dawladnimo, wax kastana waxeey ka billaawdaan madaxweeynaha, waxeeyna ku dhammaadaan isla madaxweeynaha. Sharcigana waxaa sida uu doono u isticmaala isla madaxweeyanaha, baarlamaankuna waa aalad marka loo baahdo laga dhammeeysto wixii markaa looga baahan yahay.
Dalalka Khaliijka iyo Qatar oo Soo Afjarayaya Khilaafkooda Saacadaha Soo Socda